Iphupha Malunga namabala Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga namabala
Amabala kukubonakala kwamaqhakuva kunye neepustules, ezibangelwa kukudumba kwamadlala aqinisekileyo. Indawo yobuso ihlala ichaphazeleka kakhulu ngamabala. Kodwa i-acne inokwenzeka nasentanyeni, kwi-décolleté, okanye ngasemva. Esi sifo solusu senzeka ikakhulu ngexesha lokufikisa kunye nokuba mdala. IiHormone zibonakala ngathi zidlala indima ebalulekileyo ekwenzeni amabala. Kodwa iimpembelelo zangaphandle ezinje ngoxinzelelo, ukutya okuneswekile, okanye izinto zokuthambisa zinokukhuthaza amabala.
Kodwa kutheni umfanekiso wephupha "amaqhakuva" ebonakala kwilizwe lethu lamaphupha? Iyintoni intsingiselo yolu phawu luphupha lwamaphupha kwaye zeziphi iingcaciso ezinokufunyanwa kumanqanaba ahlukeneyo okutolika?
1 Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubuso bethu bugcwele amabala ephupheni, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umntu ukhathazeka kakhulu malunga nezinto ezingenamsebenzi. Umosha amandla akho ngokunika ukubaluleka kakhulu kwizinto ezingabalulekanga kwaye kuthatha indawo eninzi.
Ukuba ubona ubuso babanye abantu bugcwele amabala, kunokwenzeka ukuba amaxhala abanye okanye izigulo zisibangela iingxaki. Mamaxesha amaninzi omnye uyasokola nabantu abagulayo kwaye baziva bengenakuzinceda kwimeko yomntu wangaphandle. Oko kunokuba ngumthwalo omkhulu emaphupheni.
Ukuba uyayibona imeko yobomi bokwenyani, ke uphawu lwephupha "induna" likucebisa ukuba uthathe ixesha elaneleyo ngokwakho kwaye ucinge ngento enokukunika amandla kwaye ikuncede uzalise iivenkile zakho zamandla.
Amaqhakuva kunye neepustules zezona zinto zibonakalisa induna. Oku kuhlala kumela ukutolikwa kwamaphupha. ukuzithemba okubuthathaka. Oku kuziva kungakhuselekanga kwangaphakathi kuboniswa kwinqanaba lephupha kunye nomfanekiso ophuphayo wamabala. Emva koko "isiphene" sibonakala ngaphandle, ukuba umntu uye wacinga ngaye ixesha elide.
Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolikwa kwengqondo
Nokuba ephupheni, ubuso obugcwele amabala bunokubangela uxinzelelo. Ngokwembono yengqondo, ukubonakala kwamaqhakuva kunye neentloko ezimnyama kulusu ngokwalo kubonisa ukuba kukho into etyhala ngaphakathi ngaphandle.
I-Pus kwii-pustules ibonisa ukuba umntu ophuphayo izityholo ezimbi ucinezelwe kakhulu. Kunzima kuye ukujongana nezi nkxalabo zeemvakalelo kwaye ukuziqhela kuzo ngendlela esempilweni.
Nangona kunjalo, ukubonakala kwamabala njengephupha kubonisa kwabo bachaphazelekayo ukuba kubalulekile Imida ukubeka nokususa izinto ezimbi ebomini bakho.
Ukuba ujonga omnye umntu one-acne enesibindi ngokuziva uzothekile, unokuba uphakame kakhulu. ibango lokugqibelela kuye nakwabanye abantu. Le meko yamaphupha iphakamisa ukuba umphuphi akafuni ukujongana nezinto ezingathandekiyo ebomini. Mhlawumbi uziva ucace gca ngeli thuba lamaphupha ukuba usenamalungu amnyama okanye angathandekiyo ngawe, ongafuni ukuwajonga okanye ukuwamkela phantsi kwayo nayiphi na imeko.
Uphawu lwephupha «amabala» - ukutolika ngokomoya
Kwinqanaba lokuchazwa kwephupha lokomoya, umfanekiso wephupha "amabala" uquka oko Inokubakho kuphuhliso olungaphezulu. Nangona kunjalo, oku kunokukhula kuphela xa iphupha likulungele ukuvumela ukuba kwenzeke ntoni. Kuya kufuneka ucinge ukuba inkqubo nganye yophuhliso ilandela ishedyuli yayo.
Iphupha malunga neNombolo 90
Iphupha malunga neCheerleader